Sierra AirPrime EM MC မိုဘိုင်း Broadband လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေးကော်နက်ရှင် Manager ကို | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
နိုဝင်ဘာလ 28, 2017 admin ရဲ့ 3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို, လြှောကျလှာ, မောင်းသူ, ထုတ်ကုန်များ 0
To connect AirPrime EM/MC Series modules to your PC running Windows, သငျသညျကွန်နက်ရှင်မန်နေဂျာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. Please install USB drivers as mentioned in the related items.
Sierra WWAN Wireless WiFi Software is recommended for end-customers, အဆင့်မြင့်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်.
Skylight Application ဒေါင်းလုပ် (စကားဝှက်ကို : ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
More Mobile Broadband info, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ~
ပြတင်းပေါက် updated Intel ကဝိုင်ယာလက်စက်ကိုမောင်းသူ 10 OS ကို-STORE အားဖြင့်
မိုဘိုင်းဖုန်း 64-နည်းနည်းက Windows စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု processor ​​ကို ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စီပီယူ OS ကို-STORE HTC က HD Graphics စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Nokia က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Software များ ဥပဒေရေးရာအနက် device ကိုမော်ဒယ် နည်းပညာ ပရိုဆက်ဆာ Samsung က Intel က Technology_Internet
Intel က Server ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က Intel က ပရိုဆက်ဆာ OS ကို-STORE နည်းပညာ Software များ HD Graphics Samsung က စမတ်ဖုန်းများ 64-နည်းနည်းက Windows စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Technology_Internet Qualcomm မှ ဥပဒေရေးရာအနက် Samsung ရဲ့ Galaxy စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စီပီယူ မိုဘိုင်းဖုန်း HTC က Sony Ericsson က processor ​​ကို device ကိုမော်ဒယ်